banner-1 « Ramechhap News
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा खुद १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत बिक्री गरेको छ । प्रााधिकरणले देशभित्र खपत
१६ असार, रामेछाप । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङ सवारी दुर्घटना भएको छ । ओखलढुंगाबाट रामेछाप हुँदै काठमाडौ फर्कने क्रममा गुरुङ सावर बा १९ च १८३९ नं को उक्त
१६ असार, रामेछाप । सुनापति गाउँपालिकाले पाँच वटै वडा जोडने चक्रपथ निर्माण गर्ने भएको छ । सुनापति गाउँपालिको अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा पालिकालाई जोडने चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको
१६ असार, रामेछाप । रामेछापमा एक बालिकामाथि जबरजस्तीकरणी भएको अस्पतालको रिपोर्टले देखाएको छ । बालिकामाथि जबरजस्तीकरणी भएको आरोपमा प्रहरीले रामेछाप नगरपालिका–४ हिमगंगामा सुन्तलेटारका ६२ श्याम प्रसाद घिमिरेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर
१४ असार, रामेछाप । रामेछापमा १३ बर्षिय बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा ६२ बर्षका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । रामेछाप नगरपालिका–४ हिमगंगामा सुस्तमनस्थितिकी एक १३ बर्षिय बालिकालाई फकाएर आफ्नै घरमा
११ असार, रामेछाप । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आफूले योजनाबद्ध रुपमा काम सुरु गरेको बताएका छन् । उनले खेल क्षेत्र सुधारको लागि काम
११ असार, रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ मा आज साँझ गाडी दुर्घटना भएको छ । राकाथुमको पिपलटारमा सुजुकीको सेल्स गाडी दुर्घटना भएको हो । दुर्घटना हुँदा गाडीका चालक र गाडी
मन्थली नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ४० करोड, कुन योजनालाई कति ? (बजेटसहित)
१० असार, रामेछाप । मन्थली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्याएको छ । गत आर्थिक बर्ष भन्दा ३६ करोड बजेट थप्दै जिल्लाको आठ स्थानीय तह
भटौली खोला थुनेर खाँडादेवी गाउँपालिकालाई हराभरा बनाउँछौः अध्यक्ष श्रेष्ठ
१० असार, रामेछाप । खाँडादेवी गाउँपालिकाले भटौली खोला थुनेर गाउँपालिकालाई हराभरा बनाउने नीति तथा योजना अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पालिका अतिसुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने भएकाले खानेपानी र
रामेछाप नगरपालिकाले ल्यायो ७४ करोड ६५ लाखको बजेट, कुन योजनालाई कति बजेट ? (पूर्णपाठसहित)
९ असार, रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि ७४ करोड ६५ लाख बजेट ल्याएको छ । रामेछाप नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको हो